Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo kulan la qaatay Bulshada Rayidka ah (Sawiro) – SBC
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo kulan la qaatay Bulshada Rayidka ah (Sawiro)
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr Cabdiweli Maxamed Ali Gaas ayaa maanta xafiiskiisa kula shiray ururada bulshada rayidka ah.
Ururada Bulshada Rayidka ah ee uu maanta Ra’iisul Wasaaraha la yeeshay kulanka ayaa isagu jiray dhammaan qeybaha bulshada ay ka koobantahay. Waxaa goobta kulanka ka hadlay shaqsiyaad ka mid ah ururada bulshada rayidka ah oo si aad ah u soo dhoweeyey kulanka, isla markaana siiyey Ra’iisul Wasaaraha warbixinno la xiriira xaaladda dhabta ah ee dalka iyo doorka ururada bulshada rayidka ah. Waxeyna ka codsadeen Ra’iisul Wasaaraha inuu dar-dargeliyo howlaha xukuumadda, gaar ahaan gar-gaarka bani’aadanimo.
Ururada bulshada rayidka ah talooyinkii ay u gudbiyeen Ra’iisul Wasaare Dr Cabdiweli waxaa ka mid ahaa in la sameeyo Hay’ad Maareysa Masiibooyinka, in la mideeyo dadaaalada, lana sameeyo dalad mideysa dowladda, bulshada rayidka iyo hay’adaha gar-gaarka iyo in la gaaro dadka dhabta ah ee dhibaateysan, lana sameeyo tirokoob dhab ah. Ururada bulshada rayidka waxey codsadeen in Dowladda ay soo dhexgasho bulshada.
Ra’iisul Wasaare Dr Cabiweli Maxamed Cali ayaa yiri “ Ururada Bulshada Rayidka ah waa aasaaska bulshada, doorkiina waa muhiim, xukuumaddu aad iyo aad bey idiin soo dhoweyneysaa. Tallooyinkiina iyo wadatashigiina muhiim bey noo tahay, door weyn baad ka cayaari kartaan xal u helidda mushkiladaha jira.
“Sidaad la socotaan macluul ba’an baa shacabkii heysa, waxaana idinkaga mahadcelinayaa doorkiina gurmadka abaaraha, waxaana idinku dhiiri gelinayaa inaad sii wadaan. Xafiiskeyga waa idiin furanyahay, waxaana yeelan doonaa wadashaqeyn buuxda.” Ra’iisul Wasaaraha oo ka jawaabayey codsigii ahaa in la sameeyo Hay’ad Maareysa Masiibooyinka ayaa sheegay “ Xukuumaddu waxey diyaarisay dhaqangelinta hay’addan oo dhowaan lagu dhawaaqi doono.”
Shirkan ayaa ah kii ugu horreeyey ee uu Ra’iisul Wasaarahu la yeesho bulshada rayidka ah tan iyo intii loo magacaabay xilka Ra’iisul Wasaarenimo. Ra’iisul Wasaarahu waxuu sheegay inay jiri doonaan kulamo joogta ah oo ay Xukuumadda iyo bulshada rayidka ah isaga kaashanayaan xal u helida mushkiladaha jira.
– DHAMAAD – –